symbian မှာ iphone app တွေ run လို့ ၇ လားဗျ။ - MYSTERY ZILLION
မူလ › Mobile › Symbian ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
symbian မှာ iphone app တွေ run လို့ ၇ လားဗျ။
Erase March 2011 edited March 2011 in Symbian nokia n8 မှာ iphone app တွေ run လို့၇လားဗျ။ကျွန်တော် သိချင်လို့ ပါ။၇၇င် ဘယ်လို လုပ်၇မလဲ။ တစ်ချက် လောက်၇င်းပြပါလား။ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ်။ မှတ်ချက်များ
saturngod March 2011 edited March 2011 Administrators it's not possible ...Let think ... iPhone using touch ... most of the symbian are keyboard and click ... click..Nokia N8 is using symbian3.... iPhone app is run on iOS ...not same OS .... no vmware or wine for that ... DragonVirus March 2011 edited March 2011 Registered Users Nyan Linn Myat;84454 said:nokia n8 မှာ iphone app တွေ run လို့၇လားဗျ။ကျွန်တော် သိချင်လို့ ပါ။၇၇င် ဘယ်လို လုပ်၇မလဲ။ တစ်ချက် လောက်၇င်းပြပါလား။ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ်။
ဘာမှမဆိုင်ဘူးထင်တယ် .. OS မှမတူတာ .. ဒါပေမယ့် iphone က apps တွေ symbian အတွက်ရနိုင်တာမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. eg. Angry Birds ဆို iOS , android, symbian အတွက်ရှိပါတယ် .. အဲဒီလိုမျိုးရှာကြည့်ရင်တော့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ် .. အကိုပြောသလို iphone က apps တွေကို symbian မှာ run ဖို ့ကတော့လုံး၀မဖြစ်နိုင်ပါဘူး .. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ iOS apps နာမည်လေးတွေကို " ...... for symbian" ဆိုပြီးရှာကြည့်ပေါ့ .. mtelectronic.ec March 2011 edited March 2011 Registered Users DragonVirus;84487 said:ဘာမှမဆိုင်ဘူးထင်တယ် .. OS မှမတူတာ .. ဒါပေမယ့် iphone က apps တွေ symbian အတွက်ရနိုင်တာမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. eg. Angry Birds ဆို iOS , android, symbian အတွက်ရှိပါတယ် .. အဲဒီလိုမျိုးရှာကြည့်ရင်တော့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ် .. အကိုပြောသလို iphone က apps တွေကို symbian မှာ run ဖို ့ကတော့လုံး၀မဖြစ်နိုင်ပါဘူး .. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ iOS apps နာမည်လေးတွေကို " ...... for symbian" ဆိုပြီးရှာကြည့်ပေါ့ ..
angrybird တို ့ဆိုတာလည်း symbian အကုန်လုံးမရနိင်ပါဘူး symbian^3 os သုံးဖုန်းတွေမှသာရနိင်ပါတယ်။ athaylaytun March 2011 edited March 2011 Registered Users NOKIA N8 အတွက် Avatar hd game free ရတဲ့ဆိုဒ်ရှိရင်ညွှန်ပြပေးကြပါလားဗျာ.......... DragonVirus March 2011 edited March 2011 Registered Users athaylaytun;84731 said:NOKIA N8 အတွက် Avatar hd game free ရတဲ့ဆိုဒ်ရှိရင်ညွှန်ပြပေးကြပါလားဗျာ..........
http&#58;//www.n8fanclub.com/2011/01/james-camerons-avatar-hd-v102-symbian3.html Morris March 2011 edited March 2011 Moderators impossible now . but i don't know any further in future coz of i am notafortune teller . In order to run these kind of app on symbian , we should Virtualization as Ko Saturn Said . But da' VMware need certain amount of memory especially in higher memory feeder's app on ios . so most of the symbian based phone are lower memory than iphone . so it can't still possible whether all memory give from symbian or not . but when phone were become more and more like to beaPC especially in memory . da' dream will occur. but we need to think abt other factors and other point of views. Sett_Paing August 2011 Registered Users i have most of the HD games for nokia N8 , i'm now also use this handset if i have free time i will upload for my fri... naylin4u August 2011 Registered Users NOKIA N8 အတွက် Talking Tom Free ရတဲ့ဆိုဒ်ရှိရင် ပြောပေးကြပါအုန်းနော်....... PhyoMyanmar August 2011 Registered Users တစ်လက်စထဲ မေးလိုက်ဦးမယ် .. ဟဲဟဲAndriod ဖုန်းတွေ အတွက်ရော iPhone ဟာတွေ Run လို့ရနိုင်လားမသိဘူးEmulator လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ .. sanlinhtet November 2011 Registered Users ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ား အမႀကီးမ်ားခင္မ်ာ... NOKIA N9 အတြက္ ျမန္မာေဖာင္႔ သြင္းနည္းေလရွိရင္ေျပာေပးၾကပါအံုးခင္မ်ာ... sanlinhtet November 2011 Registered Users ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ား အမႀကီးမ်ားခင္မ်ာ... NOKIA N9 အတြက္ ျမန္မာေဖာင္႔ သြင္းနည္းေလရွိရင္ေျပာေပးၾကပါအံုးခင္မ်ာ... zither November 2011 Registered Users For android vs iOS, running one apps on other is impossible until now. If someone make emulator to run iOS apps on android Apple will sue for copyright. For android emulator on iOS, it's sure that Apple will not accept that. :D zither November 2011 Registered Users For android vs iOS, running one apps on other is impossible until now. If someone make emulator to run iOS apps on android Apple will sue for cop thurinehtun August 2012 Registered Users အကို sonyericsson u5at s60 symbian os ဖုန္းမွာ ျမန္မာ font ထည့္လို႔ရလား ။ Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla